gcina i-300 yeedola kwi-apile & apos; s i-macbook pro (15.4 ', 2018) nge-processor engundoqo ye-i7 processor, ibar ye-touch, 16gb ram, 512gb ssd
Eyona Iindaba Kunye Nokuphononongwa Gcina $ 300 kwiApple & apos; s MacBook Pro (15.4 ', 2018) ngeprosesa ye-Intel Core i7, iTouch Bar, 16GB RAM, 512GB SSD
Gcina $ 300 kwiApple & apos; s MacBook Pro (15.4 ', 2018) ngeprosesa ye-Intel Core i7, iTouch Bar, 16GB RAM, 512GB SSD
I-Apple 15.4 'MacBook Pro eneTouch Bar (2018, Indawo eMnyama, iSilivere)
Ividiyo yeB & H yeVidiyo
$ 2, 799-> $ 2,499
Iilaptops ezintsha zeMacBook Pro zizixhobo ezifanelekileyo, ngelishwa ezihamba kunye neMSRPs ezinyibilikisiweyo. IiMacBooks zikwaziwa ngokubanzi ngokugcina amaxabiso kakuhle emva kokukhutshwa, ke ukubona isaphulelo kwelinye kukungaboni kakuhle. Ukuba unayo imali kunye nenjongo yokutyala imali kwi-15.4-intshi iMacBook Pro ukusuka ngo-2018, unokufumana esi sivumelwano se-B & H sikulungele.
IMacBook Pro kwintengiso yenqanaba lokungena le-15.4-intshi yemodeli. Olu seto lubiza i-2,800 yeedola ukuba ukhetha ukuyithenga kwivenkile esemthethweni yeApple, kwaye ngelixa ixabiso le-B & H lifuna ukubiza ixabiso leedola ezingama-2 500 lisabonakala, iidola ezingama-300 kulondolozo ayisiyonto yokungahoyi nokuba yeyiphi.
Le laptop ye-Apple inomboniso we-15.4 'Retina ngesisombululo se-2880 x 1800, utyikityo lokuchukumisa iBar olongeza uluhlu lolawulo lwe-multitouch ngaphezulu kwebhodibhodi, iprosesa eyintloko ye-Intel Core i7 6 - (2.6GHz inokunyuswa ukuya kuthi ga 4.3GHz), i-16GB ye-DDR4 RAM, iRadeon Pro 560X GPU ene-4GB yememori ye-GDDR5, kunye ne-512GB yokugcina i-SSD.
Ukuba esi sivumelwano sinomdla kuwe, zive ukhululekile ukulandela ikhonkco elingasentla kwi-B & H. Inkqubo ye-intengiso iyaphelange-11: 59 pm ET ngoJanuwari 31.
Ubuncinci abathengi beVerizon kufuneka babuyise esi sixhobo siphosakeleyo ngaphambi kokuba umlilo
I-Apple Wallet iya kuxhasa ii-ID kunye neminyango nge-iOS 15
I-Apple iPhone 7 Plus vs LG V20
UMark Cuban uthatha uLily Adams kwintengiso entsha ye-AT & T